Rwiyo rwaDhavhidhi, rwechiyeuchidzo. 38 Haiwa Jehovha, musanditsiura makatsamwa,Kana kundiruramisa makashatirwa.+ 2 Nekuti miseve yenyu yakandibaya ikanyura mandiri,Uye ruoko rwenyu ruri kundidzvanyirira pasi.+ 3 Ndiri kurwara nemuviri wese* nemhaka yehasha dzenyu. Mumapfupa angu hamuna rugare nemhaka yechivi changu.+ 4 Nekuti zvitadzo zvangu zvatutirana pamusoro wangu;+Zvandikurira semutoro unorema. 5 Maronda angu ava kunhuhwa uye anyengaNemhaka yeupenzi hwangu. 6 Ndiri kushungurudzika uye ndakasuruvara zvikuru;Ndinongofamba ndakasuwa zuva rese. 7 Mukati mangu muri kupisa;Ndiri kurwara nemuviri wese.+ 8 Handichazivi zvekuita uye ndapwanyika zvachose;Kutambura kwemwoyo wangu kuri kuita kuti ndigomere zvinonzwika.* 9 Haiwa Jehovha, zvido zvangu zvese zviri pamberi penyu,Uye kugomera kwangu hakuna kuvanzwa kwamuri. 10 Hana yangu iri kurova, simba rangu rapera,Uye maziso angu haasisina chiedza.+ 11 Shamwari dzangu nevamwe vangu vava kutambira kure neni nemhaka yechirwere changu,Uye vanhu vepedyo pedyo neni havachadi kusvika pandiri. 12 Vaya vari kutsvaga upenyu hwangu* vari kunditeya;Vaya vari kuedza kundikuvadza vanotaura zvekundiparadza;+Vanoswera vachitaura zvekunyengera. 13 Asi ini ndakaita sematsi, ndisingavateereri;+Ndakaita sembeveve, ndisingavhuri muromo wangu.+ 14 Ndava kunge munhu asinganzwi,Ane muromo usina chekutaura kuti azvidzivirire. 15 Nekuti ndakamirira imi, haiwa Jehovha,+Uye makandipindura, haiwa Jehovha Mwari wangu.+ 16 Nekuti ndakati: “Ngavarege kufarira nhamo yanguKana kuzvikwidziridza pamusoro pangu kana tsoka yangu ikatsvedza.” 17 Nekuti ndakanga ndava kuda kudonha,Uye ndaigara ndichingorwadziwa.+ 18 Ndakareurura chitadzo changu;+Ndaitambudzwa nechivi changu.+ 19 Asi vavengi vangu vakagwinya uye vane simba,*Vaya vanondivenga pasina chikonzero vawanda. 20 Vakanditsiva nezvakaipa pazvakanaka zvandakaita;Vaiedza kunditadzisa kuramba ndichiita zvakanaka. 21 Musandisiya, haiwa Jehovha. Haiwa Mwari, musaramba muri kure neni.+ 22 Kurumidzai kuzondibatsira,Haiwa Jehovha, ruponeso rwangu.+
^ ChiHeb., “Hapana pari nani munyama yangu.”
^ Kana kuti “ndiwombe.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “Asi vavengi vangu pasina chikonzero vazhinji.”